कांग्रेस एक भएमा कम्युनिष्टको फुर्ति खत्तम हुन्छ : तरुण दल नेता लाल ब. जिसी | सु-सुचित नेपालको चित्र
कांग्रेस एक भएमा कम्युनिष्टको फुर्ति खत्तम हुन्छ : तरुण दल नेता लाल ब. जिसी
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेताल तरुण दलका नेता लाल ब जिसीले पार्टि सुधारका लागि सबै संगठन लाोकतान्त्रीक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आाउनु पर्ने जनाएका छन् । नेता जिसीले शिर्ष नेताकै कारण कांग्रेस कमजोर बनेको आरोप लगाउदै अब ने्तृत्वको सुधार आबश्यक रहेको औल्याएका हुन् ।
मुलुकमा कांग्रेस छैन् भन्दै कम्युनिष्ट नेताहरुले झ्याली पिटिरहेको भएपनि देश नै कांग्रेस मय रहेको तर, प्रचार प्रसार हुन नसक्दा यस्तो समस्या सिर्जना भएको बताए । नेपाली कांग्रेस मुलुकको पहिलो नम्बरको पार्टि हुदा हुदै पनि अहिलेको नेतृत्वले कांग्रेसलाई समृद्धिको दिशामा लैजानुको साटो कमजोर बनाउदै लगिरहेको बताए ।
पार्टि बलियो बनाउनका भातृ संगठनको भुमिका उल्लेखनिय रहेको भएपनि शिर्ष नेताहरुले भातृसंगठन नेतृत्वलाई आफैले लगाईदिने टिकाको कारणा संठनहरु भद्रगोल हुन पुगेको आरोप लगाए । यसैले कांग्रेसमा लोकतन्त्रको आवश्यक छ । अब भातृ संगठनको नेतृत्व लोकतान्त्रीक प्रणालीबाट आउनु पर्छ । जिसीले भने्, ने्ता बन्न टिका होईन मेहेनत र जनताको विश्वास आवश्यक रहेको छ ।
अहिले पनि केहि नबिग्रियको बताउदै नेता जिसीले भने हामी पार्टिलाई अझै सफल बनाउन सक्छौ । यसका लागि पार्टिका भातृसंगठन चलाएमान बनाउनु पर्छ । करिब २९ महिना बढि भैसक्दापनि हुन नसकेको तरुण दलको नेतृत्व फेर बदल गर्नुपर्छ ।
नेविसंघ विघठन भएको छ । नेविवसंलाई पुर्नगठन प्रक्रिया अगाडी बढाईनु पर्छ । तब मात्र हामिले मुलुकबाट कम्युनिष्टका सबै फुर्ति खत्तम पार्न सक्छौ ।